Ogaden News Agency (ONA) – Maxaabiis Siyaasadeed oo Wali Gobolka Tigrey Kuxidhan.
Maxaabiis Siyaasadeed oo Wali Gobolka Tigrey Kuxidhan.
Posted by Dulmane	/ August 17, 2018
Waxaa wali xabsiyada Gobolka Tigrey ee Woqooyiga Itoobiya kujira dad maxaabiis ah oo mudo dheer uxidhnaa maamulkii wayaanaha ee talada wadanka laga faromaroojiyay iyo maamulka Tigreega ee kujira Gobolka.
Dadkan oo ubadan dad qoomiyada Tigreega udhashay ayaa lasheegay in looxidhay fikirkooda iyaga oo aan ladhacsanayn taliskii wayaanaha ee meesha kabaxay iyo maamulka kajira Gobolka Tigrey oo sitoos ah dabakhayay qorshayaasha Addis Ababa.
Dadkan Tigreega ah ee kuxidhan Gobolka Tigrey ayaa looga faa’iidayn waayay fursadii uubixiyay Raysal-wasaaraha cusub ee Itoobiya taas oo ahayd cafis guud oo uu siiyay maxaabiistii faraha badnayd ee ay xadheen maamulkii wayaanaha iyo maamuladii u adeegi jiray.
Arintan ayaa muujinaysa dhaqanka tigreega oo aad uqalafsan waxaana muuqata in Goboladii kale ee wadanka laga siidaayay maxaabiistii marka laga tago Ogadenia oo aan wali qayb kamid ah maxaabiistii sitoos ah loofasixin iyo Gobolka Tigrey oo aan laga siidaynin maxaabiistii siyaasada uxidhnayd.
Raysal-wasaaraha Itoobiya Abiye Axmed ayaa lafilayaa in uu talaabo kaqaadi doono maamulada isaga hoosyimaada ee aan amarkiisa fulinin, wuxuuna Todobaad kahor ciidamo udiray wadanka Ogadenia kuwaas oo sifo aan sharci ahayn xilkii uga qaaday wakiilkii maamulkii hore ee wayaanaha ujoogay Ogadenia Cabdi Maxamuud Cumar.